Teknolojia marketing lehibe indrindra | Martech Zone
Alarobia, Febroary 24, 2010 Asabotsy, Jona 27, 2015 Douglas Karr
Famolavolana fisaka: ati-doha
Tsia, tsy manan-javatra hamidy anao aho. Fa kosa, tiako ny hampahatsiahy anao ny fahamarinana lalina iray izay mety hadinonao: fa ny fitaovana matanjaka indrindra hivarotana ny orinasanao amin'ny fomba mahomby dia ilay iray efa anananao. Io no maotera fampitahana mandroso indrindra eto an-tany - ny atidohanao.
Ny antso hampiasa ny noggin anao manokana dia antso henontsika mandrakariva. Io no lazain'ny ray aman-dreny sy mpampianatra amin'ny ankizy, izay lazain'ny mpitantana sorena amin'ny mpiasa ary inona no lazain'ny mpanjifa tezitra amin'ny mpivarotra azy. Ka ahoana no ahafahan'ny fampitandremana taloha ho an'ny THINK manampy antsika amin'ny teknolojia marketing? Mba hamaliana izany fanontaniana izany dia mila miverina amin'ny fotony isika.
Inona no atao hoe Marketing? Inona no atao hoe Teknolojia?
Na dia Martech Zone feno hevitra mahafinaritra hanatsarana ny varotrao an-tserasera sy ireo vokatra mahatalanjona hampitomboana ny fiovam-po, tsy mbola nisy resaka be momba ny hoe "marketing" sy "teknolojia" raha ny marina midika. Ny fanoratanao ny famaritanao manokana dia fomba tsara hisainana mazava kokoa. Ity ny hevitro momba ireto teny ireto:
Marketing - Ny fanomezana ny fampahalalana mifandraika momba ny vokatrao, ny serivisinao ary ny marikao amin'ny mpihaino mety misy mpanjifa sy mpisolo vava.
teknolojia - Ny fampiharana ny siansa sy ny lojika amin'ny dingana iray ahafahana mitondra fiara fanatsarana ny rafitra amin'ny famokarana.
Toy ny famaritana rehetra dia betsaka kokoa ny hevitra fonosin'ireo teny ireo. Fa mariho ny fehezanteny nampiasako: Momba ny marketing fandaharana, fa ny teknolojia kosa dia resaka rehetra fampiharana. Midika izany fa ny marketing dia zavatra tsy maintsy ampiantsoinao, hialana amin'ny saribakoly ary hialanao amin'ny toerana mety, satria ny teknolojia dia mifamatotra bebe kokoa amin'ny fametrahana ireo singa.
Araka ny famaritako manokana, ny ifantohana ny marketing dia hafa mihitsy noho ny ifantohan'ny teknolojia. Tokony hampiasa ny marketing ho fomba hanatonana ireo mpanjifa sy mpisolo vava mety. Fa ny teknolojia dia tokony hiteraka fanatsarana azo refesina amin'ny alàlan'ny fampiasana rafitra.
Rehefa atambatra ireo teny roa ireo dia tokony hifantoka amin'ny mpijery ny teknolojia marketing ary maty paika. Miaraka amin'izany eritreritra izany, ny ankamaroan'ny ezaka ataontsika dia lasa mifantoka tanteraka. Amin'ny fanamarihana fotsiny ny fahombiazan'ny hetsika ataontsika amin'ny famaritana antsika dia afaka mahatsapa ny antony mety hahombiazana na tsy fahombiazan'ny ezaka teknolojia marketing isika.
Rafitra tsara, mpihaino diso
Moa ve ianao maka sary an-tsaina ny karatra fandraharahanao rehetra miditra ao amin'ny tahiry fivarotana mailakao ary manomboka mandefa azy ireo hafatra avy hatrany? Raha izany dia midika izany fa manana rafitra mahafinaritra ianao amin'ny fikarakarana karatra fandraharahana. Fa mino aho fa ambany ny tahan'ny fisokafanareo ary manana famandrihana matetika ianao. Izany dia satria ny karatra fandraharahana tokana azonao tsy maneho ny mpihaino mety amin'ny vokatrao. Mampiasa fitaovana lehibe ianao nefa miaraka amin'ireo olona tsy mety.
Mpihaino marina, tsy misy rafitra
Mandeha amin'ny antso varotra mahafinaritra miaraka amin'ireo kandidà matanjaka ve ianao nefa manadino ny fanarahana? Tsy maintsy manao marketing tsara ianao hahitana ireo olona ireo, na amin'ny alàlan'ny tamba-jotra, dokam-barotra na loharano hafa. Fa raha tsy mazoto manao antso manaraka ianao hanidiana ny fifampiraharahana dia tsy manana rafitra fivarotana azo antoka ianao. Ny fitarihana lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao dia tsy misy dikany raha tsy manao sonia fifanarahana mihitsy ianao.
Fotoana hanaovana Quiz Pop
Ireto misy tsy fahombiazan'ny teknolojia ara-barotra niainako tamin'ny herinandro lasa. Mora ny mahita ny antony maha-olana azy ireo. Jereo raha azonao ny antony tsy fahombiazana nahatonga ilay olana. (Safidio ny lahatsoratra eo anelanelan'ny [toa izao] ho an'ny valiny.)
Nizara zotram-pifandraisana ho an'ny hetsika fitenenana ho avy ianao, saingy tsy nampidirina ny toerana [tsy fahombiazan'ny teknolojia ambany: mila lisitra fanamarinana ianao raha hanao flyers]
Nomenao karatra fandraharahana ho an'ny orinasan-doka momba ny tranokalan'ny firenena ianao, fa ny adiresy mailakao dia miaraka amin'ny Hotmail [tsy fahombiazan'ny marketing: heverinao fa tsy mahalala / tsy miraharaha anaram-bola tena izy ny mpihaino anao]
Ny mailakao iray dia mametraka fanontaniana roa: Efa nandre momba ny serivisinao ve aho? Sa, efa mpikambana aho izay manana fanontaniana? [tsy fahombiazan'ny varotra: natambatra ho mpihira roa samy hafa tanteraka ho tsena iray ianao]
Amin'ny hetsika tambajotra dia mampanantena ianao fa handefa vaovao amiko aorian'io andro io fa aza soratana. Tsy mandre anao mihitsy aho. tsy fahombiazan'ny teknolojia: tsy manana lamina handrafetana rakitra ianao]
Albert Einstein dia voalaza fa nilaza indray mandeha fa "Ny olana lehibe sedrainay dia tsy voavaha amin'ny haavon'ny fisainana namorona azy ireo." Raha te hamaha ny olan'ny teknolojia marketing ianao, miverena amin'ny làlan'ny fisainana mazava. Tombano ireo famaritanao. Jereo hoe inona no tsy mety ataonao mba hahafahanao manomboka manao zavatra tsara.
Tags: teknolojia tsara indrindraatidohateknolojia
24 Mey 2010 tamin'ny 3:56 hariva
Mbola nifanaraka tamin'i Robby indray aho.
Rehefa mamaky ireo lahatsoratra ireo aho dia matetika no mieritreritra ny fomba hampiasako azy ireo amin'ny tsena, ary ny mifamadika amin'izany
Mar 4, 2010 ao amin'ny 11: PM PM
Asa lehibe mitondra antsika hiverina amin'ny fototra!